I-Cryogenic Pump, i-China Cryogenic Pump abavelisi, abaXhasi, iFektri-Beijing Sinocleansky Technologies Corp.
Ulapha : Ikhaya>iimveliso>Izixhobo Zokuphatha igesi
Iimpompo zokugcwalisa irhasi
Iimpompo zecarbon dioxide
Ukuhamba okukhulu kunye neempompo zoxinzelelo lwepiston
Iimpompo zeCrilogenic centrifugal
Iimpompo ze-cryogenic centrifugal yezigaba ezininzi
1. Iimpompo zegesi zorhwebo zisetyenziselwa iimveliso zokwahlula umoya: ukugcwaliswa kweoksijini engamanzi, initrojeni engamanzi, ulwelo olunamanzi, icarbon diokside engamanzi, iinkqubo zonikezelo lomoya. Iiyunithi ikakhulu zingumqolo omnye, umqolo ophindwe kabini, kunye nemiqolo emithathu yokubuyisela iimpompo. Jonga kwitafile nganye yeparamitha ethile.
Ukuhamba kwayo yi-30 ukuya kwi-5000L / H kwaye uxinzelelo lwayo oluphezulu luyi-35.0MPa.
Isithuthi esihamba ngesantya esimandla ngombane, okanye isantya esijikelezayo semoto, okanye isantya esiguqukayo kunye nesantya esiguqukayo semoto, okanye ubungqina bokudubula kwemoto okanye isiqhushumbisi sobungqina bokuguquguquka kwesantya semoto sinokuxhotyiswa ngokweemfuno ezizizo.
Ezi mpompo zisetyenziselwa ikakhulu ikharbon diokside engamanzi.
Ukuzaliswa kwekharbhon diokside yesilinda engamanzi.
Unikezelo lomoya, inkqubo yokuhambisa umoya.
Ukuhamba: 100-4000L / H
Uxinzelelo oluphezulu lokuphuma: 10.0Mpa
Ukuhamba: 4000-72500L / H
Uxinzelelo oluphezulu lokuphuma: 8.0Mpa
Impompo inoyilo lweemodyuli kunye nokugubungela ukuhamba ngokubanzi.
Kusetyenziswa intloko yokupompa ibhatyi ephezulu, kwaye isidanga sifikelela kwi-10-5 torr ukunciphisa ukunciphisa ukubanda.
Inesakhiwo esinokuthenjwa sokutywina.
Uqwalaselo oluninzi luphucula ukhuseleko kunye nezixhobo ezenzekelayo zempompo.
Ezi mpompo zisetyenziselwa ikakhulu ukugcwalisa kunye nokuhambisa iitanki zokugcina ezinamanzi anqabileyo anje ngeoksijini engamanzi, initrogen engamanzi, ulwelo lweargon kunye nolwelo olupholisayo; elona nqanaba linye, ukutsala kube kanye kunye neempompo ze-centrifugal.
Olu hlobo lwempompo lusetyenziselwa ukuhambisa nokudlulisa i-LOX, i-LIN LAr, i-LNG, okanye ezinye iziselo ezinamanzi kuxinzelelo oluphezulu; Ukongeza, iyafumaneka ngamanzi, ngeoyile, kunye nolunye ulwelo lweekhemikhali. Ezi yunithi sisigaba esinemigangatho emininzi, impompo eyakhiwe ngendlela eyi-centrifugal pump. Ngokwentsebenzo yamatywina ayo, inokuhlelwa njengempompo efakwe emanzini kunye nempompo etywiniweyo.